Egwuregwu vidio nke dakwasịrị na Islam | Akụkọ akụrụngwa
Egwuregwu vidio megidere Islam
Okpukpe abụwo okwu na-ese okwu kemgbe oge ochie na egwuregwu vidio. Ọtụtụ ụlọ ọrụ anwaala - ma gbalịa- izere nsogbu dị n'etiti okwukwe na ihe dị na mmemme ha, na-enyocha ime nnyocha nke onwe ya nke ga-ezere nsogbu n'ọdịnihu n'etiti ụfọdụ okpukpe okpukpe. Otu ụlọ ọrụ amaara nke ọma na iwepụ ọdịnaya bụ akụkọ ifo Nintendo, bụ́ onye gbalịrị ịgwọ ọrịa mgbe nile, ọ bụ ezie na dị ka anyị ga-ahụ, ọ bụghị mgbe nile ka ọ dị.
Na akụkọ a, na iji ozi ọma na-ere ọkụ, anyị ga-enyocha ụfọdụ ikpe ama ama na egwuregwu vidio bụ ebe etiti nkatọ sitere na obodo ndị Alakụba kacha sie ike.
Anyị na-amalite site na ịbanye na igwe oge anyị ma laghachi na 1998, nnukwu afọ maka egwuregwu vidiyo na nke ewepụtara otu egwuregwu kachasị mma na akụkọ ntolite: anyị na-ekwu maka akụkọ ifo. Akụkọ banyere Zelda: Ocarina of Time. Ke akpa cartridges na pụtara, i nwere ike ịhụ ihe nnọchianya yiri nnọọ ka nke islam mpekere onwa, eji na-anọchi anya ndị Gerudo ndị na ọbụna pụtara n'elu nke ọnwa mirror. A katọrọ okwukwe nke Islam Nintendo iji wepụ akara ngosi ahụ ma mesịa jiri nke ọhụrụ dochie ya, dị ka anyị ga-ahụ n'ọdụ ụgbọ mmiri nke Egwuregwu Cube ma ọ bụ na kediegwu remake maka 3DS.
Ma ọdịbendị ọdịbendị na Islam akwụsịghị n'ebe ahụ, na otu n'ime dungeons nke egwuregwu ahụ, akpan akpan ke Templelọ ọkụ, E nwere ike ịnụ ukwe ndị Alakụba na-ekpe ekpere "ọ bụ naanị otu Chukwu", "n'aha Chukwu, onye kacha nwee ọmịiko ma na-eme ebere" ma ọ bụ Allahu Akbar, nke pụtara "Chukwu kachasị."
Ihe yiri nke a bụ nke Zack & Wiki, na mma njem mere Capcom na Wii, ebe a na-anụkwa ụda olu Allahu Akbar n'oge egwuregwu vidio mbụ nke promo, na-agbanye Council American Islamic mmekọahụ - Amụma amịrị ndị Alakụba nke Amerịka- ịdebanye akwụkwọ mkpesa na ndị Japan, ndị na-alaghị azụ wepụ akwụkwọ ahụ sitere na egwuregwu ahụ ma ghara ịgbasa vidiyo vidiyo ahụ ọzọ.
Ihe okike na acha LittleBigPlanet ọ nọkwa na anya nke ajọ ifufe ahụ maka otu ihe omume. Na ọkwa mbụ nke ụwa nke atọ nke egwuregwu ahụ, akpọrọ Njem Safari, a Muslim player hụrụ nkebi ahịrịokwu si Koran na lyrics nke song na ihuenyo, na nkebi ahịrịokwu ndị dị ka "ihe niile na willwa ga-ala n'iyi" ma ọ bụ "onye ọ bụla mkpụrụ obi ga-ebu ya na uto nke ọnwụ" nwere ike nụrụ. Odi ka, agwakota ihe aguputara na kor’an na egwu bu ihe nzuzu, ma SonyN'ihe banyere ọnọdụ ahụ, a manyere ya inyocha ọdịnaya nke egwuregwu ahụ ma nye ya mgbaghara.
Na egwuregwu ọgụ Tekken Ntugharị 2 anyị nwere ike ịlụ ọgụ na ndapụta na Saudi Arabia akpọ Oasis nke oge a. N’ụzọ doro anya, n’elu ebe a, a ga - achọta ihe esere na okwu Allah, ọnọdụ dị njọ, ebe ọ bụ n’okpukpe Alakụba a machibidoro ịzọ aha Chineke. Mkpesa ndị ahụ bịara ozugbo na onye nrụpụta ihe Twitter Tekken, Katsuhiro Harada, onye rịọrọ mgbaghara ma kwuo na ọ bụ mmejọ niile n'ihi amaghị ihe, wee wepụta patch iji wepu nkọwa ahụ na ebe ahụ.
Ikpe ikpeazụ anyị ga-egosi gị na-ewetara anyị dị ka onye protagonist na esemokwu Oku ọrụ: Modern Warfare 2. Otu n'ime esemokwu dị iche iche nke egwuregwu egwuregwu a bịakwutere anyị - ka anyị cheta ọkwa dị egwu nke «Ọ dịghị Russian» - biri n'otu n'ime maapụ mode ọtụtụ egwuregwu a maara dị ka Ezumike. N'ime ya, anyị nwere ike ịnweta ime ụlọ ịwụ ebe anyị hụrụ ụfọdụ eserese. Ọ bụrụ na anyị lere anya na okpokolo agba, e nwere ike ịchọta ihe ederede na Arabic nke gụrụ ihe dịka "Allah bụ ịma mma ma hụ mma n'anya." Obodo ndị Alakụba ahụghị na ọ dabara adaba ịchọta ebe zoro aka na Chineke n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ, ọzọkwa, nchịkọta akụkọ ga-edozi ọnọdụ ahụ site na nwelite ma kpọọ mea culpa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Videogames » Egwuregwu vidio megidere Islam
Ọ bụrụ na ị bụ egwuregwu, Corsair na-eme ka ọtụtụ Mac gị
Anyị nwalere SSD World ọzọ Computing, OWC Mercury 6G